Muongorori Gene Munster anofanotaura kutengesa kwepamusoro kweAirPods pane Apple Watch | Ndinobva mac
Nhasi tinoda kumira pane zvirevo zvakaitwa nemuongorori Gene Munster pane network yemasaiti. Zviri pachena kuti anga achipa maonero ake pane iwo manhamba anogona kunge ari Apple anogona kunge achive nekutengesa kweApple Watch uye neAirPods zvine chekuita.
Tiri kutaura nezve zvigadzirwa zviviri zvakasiyana izvo makore mashoma apfuura pakanga pasina kana fungidziro nezve mukana wekuvapo kwavo uye nhasi hatimire kutaura nezvavo. Sezvaunoziva, Iko stock yeApple Watch yakatora nguva kugadzikana, izvo zviri kuitika izvozvi neAirPods.
Nekudaro, iyo nzira yemugwagwa yaApple yachinja kubva pachigadzirwa kuenda kuchigadzirwa Nekusvika kwe Apple Watch Chigadzirwa chine hunyanzvi chakasvika, chisati chamboonekwa muApple catalog uye icho chakagadziriswa kune izvo zvaionekwa panguva iyoyo munyika yehunyanzvi. Zvakadaro, Apple haina kutora zvekare uye isingasviki makore matatu pakureba kupfuura makwikwi ekuisa chimwe chakadai pamusika. Mitengo yaro yanga yakati rebei kupfuura iya yezvimwe zvigadzirwa senge iyo iPhone kana iPad zvichienderana nemodheru uye ndeyekuti pakutanga Apple yakashinga kunyangwe negoridhe, ichisvika pakuverenga nyeredzi.
Iine Series 1 uye Series 2 zvinhu zvachinja uye mutengo wemienzaniso wakadonha zvishoma kusvika pamazana mazana mashanu emadhora eiyo Edition modhi mune zvedongo zvinhu.
Nekudaro, Apple yakaenderera mberi ichichinja uye nepo mune zvimwe zvigadzirwa zvayakasarudza kuramba ichiwedzera mitengo yayo, mune zvigadzirwa zvitsva zvakaita seAirPods yasarudza kutyora makwikwi. Tinogona kuwana iyo AirPods ye179 euros, mutengo uyo kunyangwe vazhinji vachiti wakakwira hautomboiti kana tichifunga nezvemamwe marangi uye mhando yavo.
Kune ese aya zvikonzero, muongorori uyu anoti Apple inogona kunge ichiona kuwedzera kwekuwedzera mukutengeswa kweizvi zvidiki zvigadzirwa uchifarira kuti ivo vanochengetedza kuvapo kwevamwe avo vanotengeswa padiki padiki.
Sekureva kwemuongorori uyu, Kwemakore gumi anotevera tichaona kuvandudzwa kukuru kweAirPods uye kuwedzera kwemutengo wayo kusvika pamadhora mazana maviri, izvo zvinokonzeresa kuti mari yakawanda ihwehwe kubva mukutengesa kwechigadzirwa ichi kupfuura kubva kune iyo yeApple Watch. Tinogona kuzviona sechinhu chisina kunaka izvo zvinofungidzirwa kuti mutengo uchakwira zvishoma, asi zvakataurwa pane dzakawanda zviitiko kuti izvo chaizvo zvakaitwa naApple zvakadzikisa mutengo wekutanga kukwanisa kupinda mumusika unokwanisa kwazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Muongorori Gene Munster anofanotaura kutengesa kwepamusoro kweAirPods pane Apple Watch
Rongedza kuvharwa kwezvikumbiro izvo iwe zvausingachashandise neichi chemahara application